Safiotra Iraniana-Britanika Mpanao Gazety, Mibitsika Ny Niainany Ny Fanakanana Azy Tsy Hiakatra Tao Anaty Sidina Ho Any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2016 3:11 GMT
Ny alin'ny Talata teo, nibitsika nanazava ny fanakanana azy sy ny zanany vavy tsy handray ny sidina ho any Etazonia noho ilay Tolodalàna H.R 158 i Rana Rahimpour, mpitatitra vaovaon'ny BBC amin'ny teny Persiana. Sary avy amin'ny Twitter-n'i Rahimpour.
Tamin'ny alin'ny Talata teo, nangotraka mihitsy ny Twitter ho an'ireo Iraniana maro ho setrin'ny bitsika nalefan'ilay mpitatitra vaovaon'ny BBC amin'ny teny Persiana, Rana Rahimpour, taorian'ny nanakanana azy handray ny sidina avy ao Angletera ho any Etazonia.
Andro telo taorian'ny nanesorana ny sazy tamin'i Iràna, nolavin'i Etazonia ny #ESTA/fahazoandàlana voafetra nananako sy ireo olompirenena Britanika roa hafa satria manana zompirenena Iraniana ihany koa izahay.
Hazavain'i Rahimpour ao anatin'ny bitsiny fa nentina niverina izy noho ireo fepetra vaovao ampiharin'ny Lalàna momba ny Fahazoandàlana Voafetra (na ny Tolodalàna HR 158). Nolaniana tamin'ny 18 Desambra teo ilay lalàna, miaraka amin'ny fankatoavan'ny Kaongresy sy ny sonian'ny filoha Obama. Vokany, takiana amin'ireo olompirenena avy amin'ireo firenena 38 (tafitra amin'io ireo firenena ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana) tsy notakiana fahazoandàlana hidirana any Etazonia amin'izao fotoana izao, ny hangatahany fahazoandàlana raha toa izy ireo ka efa nisidina tany amin'ireo “toerana mafàna amin'ny resaka asa fampihorohoroana” toa an'i Iràka sy Siria na firenena “manohana ny asa fampihorohoroana” toa an'i Iràna sy Sodàna.
Voalazan'ny HR 158 ireto manaraka ireto momba ireo olontsotra tsy ho afa-miala amin'ilay fandaharanasa momba ny fahazoandàlana voafetra :
tany Iràka na Siria, tamin'ny fotoana rehetra na taorian'ny 1 Marsa 2011, tany amin'ny firenena iray voatondro ho isan'ny iray izay nanohana hatrany ireo asa fampihorohoroana erantany, na tany aminà firenena iray na faritra mampiahiahy tondroin'ny Departemantam-piarovam-pirenena (DHS); sy
tsy miankina amin'ny hoe olompirenena avy amin'ny firenena iray isian'ny fandaharanasa ve sa tsia ilay olona, teratany avy any Iràka na Siria, firenena iray voatondro ho mpanohana matetika ny asa fampihorohoroana erantany, na firenena hafa na faritra mampiahiahy.
Milaza ilay tolodalàna fa ilay lalàna dia hiditra hanankery manomboka ny 1 Aprily 2016, ary ny tranonkala ofisialin'ny Electronic System for Travel Authorization (ESTA) Amerikàna dia tsy mitanisa velively ilay tolodalàna vaovao.
Nohazavain'i Rahimpour ny hagagàny nahita fa nihatra sahady ilay tolodalàna, narahan'ny fanamafisana avy amin'ny ESTA, nanakana azy tsy handray ny sidina.
@ranarahimpour Na dia mihevitra ireo fameperana vaovao momba ny fivezivezena any Etazonia tsy hanankery raha tsy amin'ny 1 Aprily aza ny ankamaroan'ny olona, nolazain'ny ESTA ahy fa efa mipetraka sahady izy ireny
@ranarahimpour Naharay hafatra mifanipaka, tsy azon'ny @USAinUK antoka na mila fahazoandàlana izahay na tsia. Ny tranonkalan'ny #ESTA mbola milaza fa mihantona aloha ny fangatahana.
Ao anatin'izay heverina ho toy ny bitsika nateraky ny fihetsehampo, nohazavain'i Rahimpour fa ny zanany vavy, izay manana ny zompirenena Britanika feno, dia tsy afaka nanatrika ny fankalazana ny andro nahaterahan'ny anadahiny tany Etazonia noho ireo fameperana napetraka taminy amin'ny maha Iraniàna mizaka zompirenena roa azy.
@ranarahimpour Tsy afaka nanatrika ny fety fankalazàna ny nahaterahan'ny anadahiny amerikàna ny zanako izay olompirenena #Britanika feno, satria ny reniny teraka tany Iràna
Talohan'ity tranga ity dia efa marobe no naka ny media sosialy hanehoana ny tsy hafaliany tamin'ity fikendrena diso toerana ny Iraniàna sy Iràna ity, satria ilay tolodalàna dia navoaka taorian'ny horohoro nateraky ny Daesh (fantatra koa amin'ny hoe ISIS), ny fitàrana amin-kerin'ny Al Qaeda izay naka faritra midadasika ao Iràka sy Sira. Na tsy manana fifamatorana matanjaka amin'ireo vondrona tondroin'ny governemanta ho mpampihorohoro aza i Iràna, toy ny Hezbollah, dia iray amin'ireo firenena miady manohitra ny Daesh ry zareo hatrany ampiandohan'ity fifandonana ity.
Nanomboka niraradraraka sahady ny fanehoankevitra momba ny zavatra nanjo an'i Rahimpour.
Efa mihatra sahady izao ireo politikan'ny fanavakavahana atao amin'ireo olompirenena mizaka zompirenena roa Iraniàna -Irakiàna ary Sodiàna
raha tsy fanavakavahana mazava atao amin'ireo Iraniàna….dia inona ary io?
Tany ampiadohan'ity taona ity, nofoanan'ireo mpikarakara ny Quantum Computation Conference at Iran's Sharif University of Technology (Kaonferansa momba ny fomba fikajy Kantika) ny kaonferansa iraisampirenena iray nampiantrano ireo manampahaizana avy amin'ny anjerimanontoo Eoropeana ho valin'ilay lalàna amerikàna vaovao.
..mba tsy hametrahana ireo vahininay sy ireo mpandray anjara, ary ilay kaonferansa rahateo, ho amin'ny toerana tsy mampahazo aina sy tsy azo antoka noho ilay tolodalàna vaovaon'i Etazonia momba ny fandaharanasa amin'ny fahazoandàlana voafetra, izay mametraka fepetra amin'ireo mpisidina ho any Iràna.
Efa nanameloka sahady ilay tolodalàna ireo Iraniàna manampahefana, miaraka amin'ny Minisitra Iraniàna misahana ny raharahambahiny niantso azy io ho “tsy mitombina”, ary ireo manampahefana hafa niaiky fa mety hisy vokatra ratsy haterak'io amin'ny fizahantany sy ny toerakarena ao Iràna. Nialoha ny fanesorana ireo sazy nifandray tamin'ny resaka fandaharanasa nokleary Iraniàna, nomen'ny sekreteram-panjakana Amerikana, John Kerry, toky ireo Iraniàana manampahefana fa nisy fomba maro afaka nisakanana ny H.R 158 tsy hanohintohina ny asa fandraharahàna, miaraka aminà “fitaovana sahaza” toy ny famoahana fahazoandalàna manokana ho an'ny asa fandraharahàna.